Anatomy ee Mareegta Portfolio ee ugu Wanaagsan si loo muujiyo Shaqadaada | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Anatomy ee Mareegta Portfolio ee qumman si loo muujiyo shaqadaada
Anatomy ee Mareegta Portfolio ee qumman si loo muujiyo shaqadaada
Waa wakhti aad gacmahaaga kor u qaaddo! Maanta waxaan u daadagi doonaa mowduuca mareegaha faylalka galka ah iyo khubarada warshaduhu ay isticmaalayaan. Baro sida loo sameeyo goob qurux badan oo si gaar ah u soo bandhigaysa shaqadaada iyo muhiimada ay leedahay inaad sidaa samayso. Waxaad doonaysaa in soo-booqdayaasha iyo macaamiishu ay ku xasuustaan mashruucooda soo socda.
Soo ogow sida Behmaster macaamiishu waxay arkayaan ilaa 200% korodhka waxqabadka.
Waa maxay Mareegta Portfolio?
Maxaad Ugu Baahan Tahay Website Portfolio
Waxyaabaha Aasaasiga u ah Mareegtaada Portfolio
Waxa aad u baahan tahay si aad u dhisto Website Portfolio ah
Mareegta faylalka waa a hab gaar ah oo lagu soo bandhigo shaqadaada dadka kalena u sheeg naftaada. Waa sida goob weligood cagaar ah oo loogu talagalay mashaariicdaada, daraasadaha kiis, iyo macluumaadka adiga kugu saabsan. Intaa waxaa dheer, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu muujin karo shakhsiyaddaada, khibradaada, iyo kartidaada.
Lahaanshaha degelkaaga waxay la macno tahay in macaamiishu ay mar walba awoodaan inay ku helaan oo haddii ay xiisaynayaan, ay kula soo xiriiraan adiga. Haddi aanad lahayn joogitaan online maalmahan, waxaad ka danbeysaa wakhtiyada. 😉 Portfolio waa hab fiican oo loogu talagalay sawir qaadayaasha, naqshadeeyayaasha, horumariyayaal iyo farshaxanno kala duwan si ay shaqadooda ugu soo bandhigaan khadka tooska ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku muujiso aqoonsigaaga shaqadaada - sawiro, naqshad garaaf, sawir-gacmeed, iwm.
Isku soo wada duuboo, waxaad u baahan tahay degel portfolio si aad u soo bandhigto shaqadaada. Haddii aad tahay shaqsi, koox yar oo laba ka kooban ama shirkad toban qof ka kooban, waa muhiim in aad leedahay hab online gaar ah. Portfolio mareegaha ayaa kaa caawin doona inaad ka soocdo dadka badan, muujiso gaarnimadaada, dhisto kalsoonida, iyo Hubi in kuwa kale ay dhab ahaantii ku heli karaan.
Waxaa jira meelo gaar ah oo faylalka internetka uu ka muhiimsan yahay kuwa kale. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah kuwan soo socda, waa ammaan inaad u maleyso inaad u baahan tahay faylalka sida buuggu u baahan yahay erayo:
Horumarinta Shabakadda (outsourcing, dukaanka online)
Naqshad garaaf (naqshad calaamad, aqoonsi shirkad, waraaqo, buug-gacmeedyo, baakad)
Suuqgeynta ( suuqgeyn dhijitaal ah, naqshad daabacan, SEO, xayeysiis PPC)
Nakhshad farshaxan (sawir, muuqaal, maqal, sawir)
Laakin halkaas kuma joogsan, waxaa la mid ah naqshadeeyayaasha gudaha, fannaaniinta, moodooyinka, qorayaasha, iwm. Fikradda ugu weyni waa inaad tahay hal-abuure oo aad u baahan tahay inaad soo bandhigto shaqadaada. Mareegta Portfolio ayaa kuu ogolaanaysa inaad taas ku sameyso si tayo sare leh.
Tusaalaha Maxaad Ugu Baahan Tahay Portfolio
Maxaa dhacaya marka qof u baahan yahay calaamad badeecad, adeeg, ama shirkad cusub? Badankoodu waxay ka bilaabi doonaan raadinta Google fudud (ama laga yaabaa inay talooyin ka helaan asxaabta ama lamaanayaasha ganacsiga). Markaa marka hore, waxaad rabtaa inaad noqoto mid la raadin karo. Si aad uga muujiso aragtida macaamiishaada, halkan waa tijaabo yar.
Anigoo tixgelinaya habka ugu badan, waxaan adeegsaday Google. Waxaan ku bilaabayaa si fudud anigoo ku teebaya “logo design portfolio” gudaha baararka raadinta waxaanan rajaynayaa inaan helo qof dhab ah oo samayn kara summadayda. Oo halkaas waa, farabadan of naqshadeeyayaasha logo iman kara halkaas oo qaadashada. Waxaan dhex maraa mareegaha internetka, waxayna dhammaantood u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan. Hadda, si aad wax u doorato, waa su'aal ah dookhyada, dhadhanka iyo miisaaniyadda.
Natiijooyinka raadinta bogga 1-aad Google ee "Logo designer portfolio"
Sidaad aragtaan, doorashadu waa i hor taal. Waxaan dooran karaa shakhsi ama hay'ad. Waan ka baran karaa qof kasta adeeggiisa, arki karaa faylalka ay ku jiraan, wax ka akhriyi karaa, oo aan daraaso socodka mashruuca. Asal ahaan, shabakadahooda ayaa i siinaya dareenka cidda ay yihiin, waxa ay qabtaan, iyo waxa laga filayo haddii aan go'aansado inaan la shaqeeyo.
Hadda oo aad ogtahay ugu yaraan hal sabab oo aad ugu baahan tahay portfolio, waa waqtigii aad fahmi lahayd waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay in lagu daro mareegahaaga.
Mashruuc kastaa wuxuu u baahan yahay qaacido – ujeedo. La'aanteed, aad bay u adkaan doontaa in la soo jiito.
Marka aad samaynayso website-ka portfolio, marka hore is waydii, waa maxay ujeedadu? 🤔Riix halkan Tweet
Qaaciddada aasaasiga ah ee degelka portfolio waxaa ku jiri doona sumad, khad sumad, shaqadaada ugu fiican, iyo macluumaadka xiriirka. Mararka qaarkood tani way shaqeysaa laakiin marar badan, waa fulin xumo. Si aad u iftiimiso faylalkaaga iftiin kale, tixgeli inaad ku darto walxo kale oo muhiim ah kuwaas oo kor u qaadi doona khibrada isticmaale ee faylalkaaga: daraasado kiis, markhaatiyaal, baloog, iyo xitaa mashruuc aad hadda ka shaqaynayso. Kuwani waa xubno muhiim ah.
Markaad ka shaqaynayso naqshadaynta goobta faylalkaaga, ka fikir walxaha ay tahay in macaamiishaada mustaqbalka ay awoodaan inay helaan. Is weydii - waa maxay ujeedada faylalkaaga? Ma doonaysaa inaad iibiso adeegyadaada, ma waxaad raadinaysaa shaqo oo waxaad doonaysaa in lagu shaqaaleysiiyo, mise waa shabakad adiga kugu saabsan? Diirada ugu weyn ee goobtaada faylalka waa in ay ahaato soo jiidashada dareenka booqdaha, waxyaabaha soo socda ayaa kaa caawin doona inaad taas sameyso.
Boggaga ku saabsan
Wicitaanka Waxqabadka (CTA)
Blog iyo Syndication
Kaliya waxay qaadataa dhowr ilbiriqsi si ay u lumiso dareenka booqdaha, si aad u hubiso inaad isticmaasho ilbiriqsiyadan si caqli leh. Macaamiishaada suurtogalka ah ayaa marka hore arki doona muuqaallada iyo haddii ay jecel yihiin waxay arkaan, waxay sii wadi doonaan raadinta faahfaahin dheeraad ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay bandhig cajiib ah oo soo jiidasho leh oo ku saabsan shaqooyinkaaga.
Waxaa loo samayn karaa siyaabo badan - sawiro, bandhigyo muuqaal ah, galleries thumbnail, iwm. Tusaale ahaan, haddii aad tahay naqshadeeye Logo, hubi inaad muujiso sawir tayo sare leh oo calaamad ah oo kala duwan. Ku dheji calaamadda alaabta, kaararka ganacsiga, u muuji midabyo kala duwan - tani waxay kordhin doontaa awooddaada.
Bal u fiirso degelkan faylalka ah. Waxaa sameeyay nashqadeeyay London iyo qoraa Tim Smith. Dhexdeeda, wuxuu ku soo bandhigayaa shaqadiisa isagoo isticmaalaya sawirka thumbnail gallery.
Mareegta Portfolio oo leh sawir gacmeed
Boggaga ku saabsan wuxuu u oggolaanayaa macaamiishaada mustaqbalka inay arkaan cidda ka dambeysa shaqada, inay eegaan cidda aad tahay, iyo haddii ay jeclaan lahaayeen inay kula shaqeeyaan. Waxaa laga yaabaa inaad weydiiso, halkee ka bilaabaa? Ka bilow waxa ugu muhiimsan - naftaada. Si loo fududeeyo, waa kan liiska hubinta ee muhiimka ah ee ku saabsan walxaha bogga:
Waxay u muuqataa wax iska cad laakiin faylal badan oo badan ayaan haysan. Ka warran haddii macmiilkaagu rabo inuu cilmi-baadhis kugu sameeyo, tusaale ahaan LinkedIn? Hi, waxaan ahay Matt… waa bilow fiican inaad sii wadato sheeko adiga kugu saabsan.
Sawirku wuxuu siinayaa taabasho shakhsiyeed oo dheeraad ah. Sawir adiga ah ama sawir fiican oo adiga ah oo ku shaqeynaya naqshad cusub. Waa habka ugu asalka ah ee lagu siin karo booqdayaasha dareenka qofka aad tahay. Ka dhig mid fudud laakiin martiqaad.
Tus shakhsiyaddaada adiga oo u sheegaya sheeko ku saabsan khibradaada xirfadeed iyo shakhsi ahaaneed. Waxbarashadaada, waxaad baratay inaad qabato, mashaariicda aad jeclayd la shaqaynta, abaal-marinaha, iyo aqoonsiga. Isticmaal boggan si aad u muujiso xirfadahaaga, habka aad u fekereyso iyo waxa ay yihiin xiisahaaga. Ka dhig mid kooban, farxad iyo xasuus leh.
Hoos waxaa ah tusaale bogga "Ku saabsan" oo ka yimid Agaasimaha Farshaxanka, Marcin Dmoch. Waxa uu soo bandhigayaa isaga oo isticmaalaya naqshad midab dhalaalaya iyo qaybo yaryar oo sheekooyin ah oo ka hadlaya khibradiisa xirfadeed iyo mashaariicda ugu fiican. Waxa kale oo uu ku lifaaqay CV-ga la soo degsan karo si fudud loogu daabaco ama loogu diro dadka kale. Waa naqshad nadiif ah oo ka kooban dhammaan walxaha muhiimka ah ee looga baahan yahay bogga wax ku ool ah.
Bogga internetka ee ku saabsan bogga
Daraasado kiis ama bandhigyo ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu muujin karo baaxadda mashaariicdaada. Mashruuc kastaa waa inuu lahaadaa sheeko u gaar ah oo muujinaysa horumarka geeddi-socodka oo dhan, laga bilaabo bilawga ilaa natiijada kama dambaysta ah. Ku jabi habkan hal-abuurka leh sawirro iyo qoraallo badan oo muujinaya waxa ka dambeeya mashruuc kasta.
Sidan booqdayaashaadu waxay ku heli karaan dareenka mashaariicdaadu sida ay yihiin, iyo sida aad uga soo gudubtay wajigii qorshaynta ee aad u soo gaadhay dhamaystirka. Waa kuwan qaybaha aad ku dari karto daraasadaada kiiska:
Ujeedada mashruuca: Maxaad u bilawday mashruuca.
Ujeeddo: Maxaa kuu qabsoomay.
Dariiqa: Sida aad u dhammaysay.
Muddada mashruuca: Intee ku qaadatay.
Doorkaaga: Sida aad wax ugu biirisay kooxda ama mashruuca.
Dulmarka alaabta u dambaysa: Sawirro, muuqaalo, xiriirin, iwm.
Halkan waxaa ah tusaale wanaagsan oo muujinaya daraasaadka kiis ee Darian Rosebrook, naqshadeeye shabakadeed, iyo lataliyaha summeynta. Waxa uu isticmaalayaa faylalkiisa si uu u soo bandhigo shaqadii hore isaga oo isticmaalaya maqaal muujinaya nuxurka mashruuc kasta.
Daraasadda kiis degelka Portfolio
Tusaale kale waa Behmaster. Ma haystaan ​​website-ka faylalka, laakiin boggooda daraasadda kiisasku waa tusaale wanaagsan oo naqshad si fiican looga fikiray oo loogu talagalay in lagu muujiyo shaqada ay ku faanaan macaamiisha mustaqbalka.
Behmaster tusaale daraasaad
Dhisida qaybtaada daraasadaha ma qaadanaysaa wakhti? Dabcan, laakiin waa lagama maarmaan in loo helo shabakad kasta oo faylalka ah.
Lahaanshaha ereyada qaar ee macaamiishaadu waxay aad macno ugu yeelan karaan kuwa hadda soo degay boggaaga. Waxaad qori kartaa xirfadahaaga oo aad sheegi kartaa sida aad u fiican tahay laakiin u ogolaan dadka kale inay yiraahdaan waxay yeelan kartaa saameyn weyn. La xidhiidh macmiishii hore oo waydii odhaahyo aad ku isticmaali karto mareegahaaga. Dadka jeclaystay inay kula shaqeeyaan waxay si farxad leh ugu ammaani doonaan shaqadaada wanaagsan markhaati.
La halgamaya wakhtiga dhimista iyo dhibaatooyinka WordPress? Behmaster waa xalka martigelinta loogu talagalay inuu ku badbaadiyo waqti! Eeg sifadayada
Fiiri tusaalahan hoose ee naqshadeeye garaafiga Francesca McWhirter. Si ay boggeeda markhaatiga uga dhigto mid soo booda, waxay ku bilaabataa muuqaal geesinimo leh oo firfircoon ka dibna waxay sii waddaa markhaatifurka macmiilka ee ka hooseeya.
Marqaatiyada macmiilka mareegta Portfolio
Wicitaan ficil ah waxay bogaadinaysaa ujeedada faylalkaaga. Si lagaaga caawiyo inaad la timaadid wicitaan ficil ah oo loogu talagalay goobtaada, xasuusi naftaada ujeedada mareegahaaga. Waa maxay tallaabooyinka aad rabto in booqdayaashu ay sameeyaan? Websaydhkaaga waa inuu bixiyaa siyaabo kala duwan oo ay macaamiishu kula soo xidhiidhi karaan. Hubi inaad ku darto cinwaanka iimaylka ganacsigaaga xitaa haddii aad isticmaasho foomka xidhiidhka maadaama macaamiisha qaarkood ay ka door bidaan foomamka.
Tusaalaha hoose, wakaaladda hal abuurka ee Lounge Lizard waxay siisaa habab kala duwan oo ay macaamiishu kula xiriiri karaan. Waxaad isticmaali kartaa ciwaanka iimaylka ama waxaad buuxin kartaa foomka "Codso Soo jeedin" si aad deeq toos ugu hesho sanduuqaaga.
Mareegta Portfolio CTA/la xidhiidh
Blogging waa hab fantastik ah oo lagu wadaago sida aad u malaynayso oo lagu daro qiimo kuwa doonaya in ay iska kaashadaan. Abuuritaanka nuxurka baloogga caadiga ah waxay siinaysaa booqdayaasha sabab ay dib ugu soo booqdaan mareegahaaga. Waxa kale oo ay u fiican tahay SEO - Google wuxuu jecel yahay waxyaabaha tayada leh!
Si kastaba ha ahaatee, blogs ma aha habka kaliya. Si loo dhiso buuq ku wareegsan shaqadaada, warbaahinta bulshada ayaa sidoo kale si weyn u shaqeysa. Tusaale ahaan, Instagram oo leh 1 bilyan isticmaaleyaal firfircoon waa hab fiican oo lagu soo bandhigo shaqadaada, qaabkaaga, iyo muujinta shakhsiyadaada gaarka ah. Waxay caawisaa in la dhiso kalsoonida oo ay koraan daawadayaasha khuseeya. Suuqgeynta nuxurka waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa kanaalkaaga YouTube, podcast ama webinars. Dooro habka aad jeceshahay oo muuji naftaada. Farshaxanistaha hal-abuurka leh Elsa Muse waa tusaale wanaagsan, waxay ku qortaa baloog iyada u gaar ah oo ay ku dhejiso Instagram.
Bogga internetka ee Portfolio
Ha iloobin inaad shaqadaada ka qayb qaadato! Si la mid ah isku-darka nuxurka, waxaad geli kartaa shaqadaada ugu fiican meelaha sida Behance iyo Dribbble. Markaa inkasta oo laga yaabo inaad haysato degel faylaleed cajiib ah, iska hubi inaad ka faa'iidaysato shabakadahan kale gaadiidka bilaashka ah ee dheeraadka ah.
Behance (Tusaale: Maja Szakadát)
Waxyaabo Dheeraad Ah Oo Lagu Soo Daro
Mareegta faylalkaaga waxa ku jiri kara wax kasta. Marka laga reebo walxaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah, waxaa jira waxyaabo badan oo muujin kara goobtaada xitaa in ka badan. Muujin tusaale ah oo shaqaynaya, muunado lacag la'aan ah ee jaangooyooyinka summada, software bilaash ah, mawduucyo, iyo xitaa plugins.
Haddii aad leedahay muuqaal marti ah blogs, podcasts, jaraa'id, kanaalada madadaalada - hubi inaad sheegto. Waraysiyadu aad bay ugu fiican yihiin akhrin dheeraad ah haddii macaamiishu rabaan inay wax badan ka bartaan shakhsiyaddaada iyo shaqadaada. Sidoo kale, ku faan guulahaaga, hana ka baqin inaad la wadaagto faahfaahinta abaal-marinahaaga.
Markaad dhiseyso shabakad, waxaa muhiim ah inaad hubiso inuu yahay mid waxtar leh, shaqeynaya oo sahlan in la ilaaliyo. Doorashada qalabka saxda ah waa muhiim si loo dhiso goob faylaleed u eg xirfadle. Mid ka mid ah goobaha ugu wanaagsan uguna caansan ee dhismooyinka shabakada - WordPress waa xal fiican oo loogu talagalay freelancers. WordPress wuxuu ku siinayaa awood ka baxsan sanduuqa ku siinaya shaqeynta iyada oo loo marayo mawduucyo iyo plugins la heli karo oo aan la tirin karin.
Mawduuca WordPress wuxuu maamulaa dhinaca muuqaalka ee mareegahaaga: naqshadaynta, midabada, iyo qaabaynta. Taa bedelkeeda, plugins waa kordhinta WordPress oo qaata software-ka WordPress ee udub-dhexaadka ah oo tafatira ama meesha ka saarta shaqadeeda.
Cunsurada bogga sida foomamka xiriirka, sawirada slide-shows, baararka soo booda ee suuq-geynta waa qaybo ka mid ah mareegahaaga kuwaas oo inta badan la abuuray laguna daro iyadoo la isticmaalayo plugin WordPress ah. Waa inaadan ku xad dhaafin shabakadaada plugins aad u badan, sababtoo ah tani (mar walba maaha) waxay ka dhigi kartaa goobtaada mid culus oo gaabis ah. Taa baddalkeeda, waxaad abuuri kartaa boggaga WordPress adoo isticmaalaya mareegaha wax dhisa iyo dhowr plugins oo kale oo ay tahay in la haysto. Tani waxay kaa badbaadin kartaa wakhti waxayna kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh u bilowdo faylalkaaga (fannaaniintu badanaa ma haystaan ​​wakhti badan oo ay ku qaataan dhisidda goobahooda, sax?)
Kadib doorashada goobta, waxa ku xiga ee aad u baahan doonto waa magac domain iyo martigelin. Haddii aad tahay naqshadeeye madax-bannaan, ku qabsashada magacaaga magaca domain waxay u noqon kartaa mid aad u fiican summeynta shakhsi ahaaneed.
Martigeliyaha WordPress oo tayo leh, sida Behmaster, waxay hubin doontaa in website-kaagu uu ku sii jiro khadka, si deg deg ah loo maro, oo had iyo jeer diyaar u ah macaamiishaada suurtagalka ah. Isticmaalka sifooyinka martigelinta ee lagu daro sida CDN waxay kaa caawin kartaa in la hubiyo in dhammaan sawirada bandhigga quruxda badan ay si degdeg ah u geliyaan hillaaca adduunka oo dhan. Ha iloobin inaad hagaajiso iyaga!
U qaado faylalkaaga fursad aad kula yaabto oo aad u cajabiso macaamiishaada mustaqbalka. Mareegta faylalka ayaa kuu ogolaanaya inaad ku muujiso dhammaan shaqadaada hal meel. Tani kaliya uma eka mid u fiican macmiilka, laakiin waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad ku dhiirigeliso mashaariicdaada xiga.
U sheeg kuwa kale xirfadahaaga iyo shakhsiyaddaada. Ku muuji kala duwanaanshahaaga daraasado kiis. Noqo mid la raadin karo oo la soco tartamayaashaada. Xeerar ma jiraan wax walbana way socdaan ilaa inta aad awoodo inaad booqde ka dhigto oo ku xasuusato.
Sida loo daawado horyaalada AFC iyo NFC ee aaladaha Apple
Waxyaabaha la sameeyo iyo kuwa aan la samayn ee loogu talagalay curinta nuxurka, si loo kobciyo dhagaystayaasha